प्रधानमन्त्रीको अवस्वस्थताका कारण देखाउँदै त्रिवि सिनेट बैठक स्थगित, आंशिक शिक्षक आन्दोलित - Koshi Online
प्रधानमन्त्रीको अवस्वस्थताका कारण देखाउँदै त्रिवि सिनेट बैठक स्थगित, आंशिक शिक्षक आन्दोलित
वैशाख २३, काठमाडौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आजको लागि निर्धारित ‘त्रिविसभा’ अर्थात् सिनेट बैठक स्थगन भएको छ । त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अस्वस्थताका कारण बैठक स्थगन भएको त्रिविका उपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनियाँले जानकारी दिए ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई बैठकबारे जानकारी गराउन जाँदा उनकाो स्वास्थ्यावस्था राम्रो नभएका कारण लामो समय कुरेर पनि भेट गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, “यो बैठक कुलपतिले बोलाएको हो, उहाँले शिक्षा मन्त्रीमार्फत सभा बैठक स्थगन गर्न भन्नुभयो, मैले बैठक स्थगन गरेँ ।” उपकुलपति खनियाँले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाइने जानकारी दिए ।
त्रिवि शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले शिक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगन गरेको बताए । उनले भने, “अन्तिममा आएर सिनेट बैठक स्थगन हुँदा दुःख लागेको छ ।”
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण सिनेट बैठक स्थगन भएको भन्ने भनाइको खण्डन गरेको छ ।
प्रधामन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको बताउँदै भने, “प्रधानमन्त्री शनिबार दुई वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो भने आज बिहानैदेखि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ ।”
डा अर्यालले सिनेट बैठकमा लैजान लागिएका कार्यसूची नै स्पष्ट नभएपछि प्रधानमन्त्री त्यहाँ सहभागी नभएकाे जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई देखाएर विषयवस्तु अन्यत्र मोड्न खोजिएको आरोप पनि लगाए ।
त्रिविअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक शिक्षकले सेवा स्थायी गर्न माग गर्दै आज कीर्तिपुरमा धर्ना दिएका छन् । लामो समयदेखि सेवा गरिरहे पनि आफूहरुको स्तरोन्नति हुन नसकेको जनाउँदै उनीहरुले आज त्रिविसभा बैठक बस्ने सूचना पाएपछि त्यस आसपासका क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम गरेका हुन् ।
फागुनमा हुने भयो स्ववियूको निर्वाचन, त्रिविले दियो देशैभरका क्याम्पसलाई तयारीको…
चैत १० गतेदेखि एसइई परीक्षा सुरू, अबदेखि प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गने !
अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टर्सको प्राइभेट परीक्षा दिन नपाइने !
काठमाडौं जान नपाएको भन्दै शिक्षकले गरे विद्यालय बन्द !
कक्षा दुईसम्मको विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिन नपाइने, ५ किलोभन्दा भारी झोला बोकेर…